Ml နဲ့ PUBG ကလွဲရင် ဂိမ်းကောင်းကောင်းတွေမရှိတော့ဘူးလား Part (2)
Aung Myo Hein 19 Jun, 2021
Part (1) တုန်းကလည်း တရုတ်ထုတ်မဟုတ်တဲ့ ဂိမ်းကောင်းလေးတွေပြောပြ ပြီးပြီဆိုတော့ အခုလည်းဘာဆော့ရမလဲ မသိတဲ့သူတွေအတွက် ဂိမ်းကောင်းကောင်းလေးတွေ ထပ်ပြောပြပါမယ်။ Online ရော Offline ရော Single Player, Multi-Player အစုံပါမှာဖြစ်လို့ အောက်မှာ တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ။
Dawn Of Zombie
ဒီဂိမ်းကို ဆိုက်ပရပ်နိုင်ငံအခြေစိုက်ဂိမ်း studioတစ်ခုကရေးဆွဲထားပါတယ်။Online Survivalဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Single Player ကိုပဲ Onlineဆော့ရမှာပါ။ဂိမ်းပုံစံကအစားသောက်နဲ့ craft ဖို့လိုတဲ့ ပစ္စည်း တွေကိုရှာဖွေပြီးညဘက်ရောက်ရင် Campမှာနေပြီး Zombie ရန်က Defense ရမှာပါ
မနက်ဆို Zombieနည်းပေမဲ့ညဘက်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုများပါတယ်။အဓိကလုပ်ကမဲ့ Quest တွေအပြင် ပစ္စည်း တွေ Craft ပြီး ခံတပ်ကြီးလာအောင် ဆောက်ရမှာလဲ ဖြစ်ပါတယ် armor, vehicles - 150ခုအထိပါဝင်ပြီး Weapons 60ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။ဂိမ်းမစခင် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Characterကိုရွေးပြီးဆော့ကစားနိုင်သလို Customize လုပ်လို့လဲရပါတယ် Storyကို Followပြီးသွားရမဲ့ဂိမ်းတစ်ခုလဲ ဖြစ်ပါတယ်။တစ်နေရာနဲ့တစ်နေရာကို Explore လုပ်သွားလာလို့ရသလို Realistic graphics နဲ့ Day&Night Modeတွေလဲပါလို့ဆော့ကောင်းတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဂိမ်းမှာတော့ Solvalley ကျောင်းက အရမ်းဆိုးတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Alex နေရာကဆော့ရမှာပါ သူ့မှာစော်တွေအများကြီးရှိပါတယ် တစ်နေ့တစ်ယောက်မကုန်နိုင်ပါဘူး ။Dating sim နဲ့ Visual Novel ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ Solvalley School ဂိမ်းက Dating ဂိမ်းအမျိုးစားဖြစ်ပြီး Solvalley ကျောင်းမှာ လှည့်ပတ်ပြီး စော်ရှာရမှာပါ ပိုက်ဆံရှာချင်ရင်တော့ အားကစားရုံသွားပြီးအလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ် တွဲဖို့ရွေးချယ်စရာ အယောက် ၃၀ အထိရှိပါတယ် ကိူယ်ကြိုက်တာရွေးပြီး တွဲလို့ရပါတယ်2019မှာစထွက်ထားတဲ့ဂိမ်းဖြစ်ပြီးတော့Android နဲ့ PC အတွက်ပဲရအုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ တခြား Platformတွေမှာမရရှိနိုင်သေးပါ လွန်ခဲ့တဲ့7လက Updateအသစ်ထွက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ New scenes အသစ်တွေလဲပါဝင်လာပါတယ်။ အပြင်မှာစော်မရှိတဲ့ FA တွေဆော့သင့်တဲ့ ဂိမ်းပါ။
စိတ်ညစ်စရာတွေများလာတဲ့အခါဆော့ကြည့်သင်တဲ့ဂိမ်းတစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ် ဒီဂိမ်းကတော့ Flight လို့ခေါ်ပါတယ် Betaအဆင့်ပဲရှိသေးတာဖြစ်ပြီး ဒီဂိမ်းထဲမှာတော့ ပျံသန်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိတဲ့ Monk တစ်ပါး နေရာကဆော့ရမှာပါ လူအဖြစ်နဲ့လျောက်သွားလို့ရသလို ငှက်အဖြစ်နဲ့လေပေါ်မှာပျံလို့လဲရပါတယ်။
ဒီဂိမ်းက Missionsရယ်လို့ဘာမှမပါပဲနဲ့စိတ်ပြေလက်ပျောက်လျောက်သွားလို့ရမယ် မြစ်တွေ ချောင်းတွေထဲဆင်းလို့ရမယ် သစ်တောကြီးထဲလျောက်သွားလို့ရပါတယ်။တစ်ကယ် Openworld အစစ်ကြီးဖြစ်ပြီး Details ကျလွန်းပါတယ် Graphicအပြင် သစ်ရွက်လှုပ်တာ ရေစီးတာကအစ သေသေချာချာကျကျနန ရေးဆွဲထားတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။Sky Children လိုမျိုး Chillလို့ရတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုပါDay&Night Viewလဲပါဝင်ပြီး လူနေအိမ်တွေလဲအများကြီးပါပါတယ်။နီပေါနိုင်ငံအခြေစိုက် Studio တစ်ခုကReleaseထားတာဖြစ်ပါတယ်
Warface: Global Operations-Shooting game(FPS)
ဒီဂိမ်းကတော့ နယ်သာလန်နိုင်ငံက Developer ကနေထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး First person shooting Gameတစ်ခုပါ။ Call Of Duty Mobile နဲ့ဆင်ပြီးတော့မြေပုံ (၇)ခုအထိ ပါဝင်ပါတယ်။ Pvp ပုံစံ ဖြစ်ပြီး လက်နက်ပေါင်း (၂၀၀)ကျော်ပါဝင်ပြီး Graphic ကလည်းမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။Size က (1.9) GB လောက်ရှိပြီးတော့ Play Storeမှာလွယ်လွယ်ကူကူဒေါင်းလို့ရပါတယ်။
Viuမှာ ဘယ်လို စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေရှိလဲ??
Startup KDrama ထဲက Main Actor တွေကို ဒုက္ခရောက်စေခဲ့တဲ့ Acqui-Hiring ဆိုတာ
ရုပ်ရှင်ချစ်သူတွေမဖြစ်မနေသိထားရမယ့် Telegram Channel များ
Wai Yan Kyaw7Jun, 2021
(၂၀၂၁)ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိထားတဲ့ K-Drama Series တွေထဲက လူကြိုက်အများဆုံး Series (၅)ခု
ဟောလိဝုဒ်သမိုင်းမှာ အရင်းတောင်ပြန်မရပဲ အရှုံးပေါ်ခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီးထမင်းငတ်ဇာတ်ကားများ
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ထင်မထားရလောက်အောင် ဝင်ငွေအများဆုံး မင်းသမီးက ဘယ်သူတွေများလဲ?
ဝမ်းနည်းနေရင် ဒီသီချင်းတွေ နားထောင်ပါ
နာမည်ကျော် လူကြိုက်များတဲ့ စာရေးဆရာ ရွှေဥဒေါင်းရဲ့ အဖိုးတန်စာအုပ်များ